Haninge मा जानुहोस् - घटनाहरु र चीजहरु Haninge मा गर्न को लागी
Haninge पत्ता लगाउनुहोस् फेसबुक
घुम्न लायक ठाउँहरु
Frönäs, Gålö 28 मे बिहान 11 बजे नेट रेखाचित्र
हेर्नुहोस्, गर्नुहोस् र अनुभव गर्नुहोस्
Naturpasset र Cykelpasset - प्रकृतिमा बाहिर र ओरिएन्टियरिङ प्रयास गर्नुहोस्
Dalarö मा पाल जान सिक्नुहोस्
पसल र पसल
Tyresta फार्म बाट प्राकृतिक grazed मासु संग मासु बक्सहरु
आवास र आवास
गुणस्तरीय होटल Winn - राती सुन्दर रुडान बाहिरी क्षेत्र को नजिक रहनुहोस्
Tyresta मा एक गाइड बुक - मृत्यु आदिम वन मा जीवित छ
Tullhuset भोजनालय र बार
हामी एक कार्बनिक फोकस संग खाना र पेय सेवा र उपलब्धता अनुसार सामग्री छनौट र सबै भन्दा राम्रो प्रत्येक मौसम को प्रस्ताव छ। गर्मी को महीनाहरु को दौरान हामी खुल्ला 12.00 - 22.00 हरेक दिन। जाडो को समयमा, हामी Dagens लंच सोम -शुक्र 10.30 - 14.00 को सेवा। हामी पनि शुक्रवार र शनिवार १.16.00.००-२२.०० खुला छौं। हाम्रो साथ एक विवाह, बप्तिस्मा वा अन्त्येष्टि बुक गर्नुहोस्। खानपान पनि। टेलिफोन 22.00-08 501 501 न्यानो स्वागत छ!
एक परिवार को स्वामित्व वाला छात्रावास र हाम्रो लागि प्रत्येक अतिथि अद्वितीय छ। हामी सबै वर्ष राउन्ड खुला छौं र देश मा सुन्दर प्रकृति मा एक सुखद आवास को प्रस्ताव स्टकहोम शहर बाट कार बाट मात्र 25 मिनेट। घरहरु गोल्फ कोर्स र निकटतम छिमेकी को रूप मा कृषि संग जंगल को किनारा मा स्थित छन्। यहाँ तपाइँ शान्ति पाउनुहुनेछ!
साँचो टारपीडो डु boat्गा आत्मा मा एक अविस्मरणीय अनुभव र टर्पीडो डु boat्गा गति मा द्वीपसमूह को आनन्द लिने को शानदार भावना को लागी Gål on मा शीत युद्ध टारपीडो डु boat्गा आधार मा स्वागत छ।
Utö गेस्ट हार्बर
Utö मा प्रकृति र वरपर ऐतिहासिक र अद्वितीय छन् र तपाइँ शान्ति र सादगी, साथै साहसिक, लक्जरी र रात्रि जीवन को अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ रेस्टुरेन्ट र आवास को एक धनी चयन छ र बन्दरगाह र Gruvbyn मा गर्मी को आनन्द सँधै नजिक र बाथर्स र boaters को पूर्ण छन्। तर मात्र एक ढु's्गाको फेंक त्यहाँ प्यारा बलौटे समुद्र तट र अछूत प्रकृति, हिड्ने वा एक धेरै आफ्नै ग्लेड वा खाडी को दूरी साइकल यात्रा संग छन्। यदि तपाइँ तपाइँको आफ्नै डु with्गा संग आउनुहुन्छ, तपाइँ उत्तर वा दक्षिण बन्दरगाहमा डक गर्नुहुन्छ र एक पटक किनारामा तपाइँ Utö को आनन्द लिन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। बन्दरगाह क्षेत्रमा त्यहाँ एक स्वागत, कियोस्क, क्याफे, र आइसक्रीम पार्लर छ। यहाँ तपाइँ पनि सक्नुहुन्छ
Tyresta राष्ट्रिय निकुञ्ज
Tyresta नेशनल पार्क स्वीडेन को 30 राष्ट्रीय पार्कहरु मध्ये एक हो। प्राइमवल वन मात्र २० किलोमिटर पुरानो स्टकहोम बाट प्राचीन रूखहरु र चट्टानहरु संग जो समय को पारित को गवाही दिन्छ। Tyresta गाउँ राष्ट्रिय निकुञ्ज को मुख्य प्रवेशद्वार हो जहाँ कठिनाई को फरक डिग्री संग धेरै ट्रेल्स शुरू हुन्छ। Naturum Nationalparkernas Hus मा तपाइँ अधिक जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एक क्याफे र एक प्रदर्शन यार्ड, अन्य चीजहरु को बीच मा, मलबे र rosehip भेडा छ। कुल मा, Tyresta ५,००० हेक्टेयर पर्वतारोहण ट्रेल्स को ५५ किमी संग मिलेर बनेको छ। एक वास्तविक आदिम वन मा स्वागत छ!
Dalarö अतिथि बन्दरगाह Askfatshamnen मा सबै भन्दा सही द्वीपसमूह मा - आकर्षक वातावरण, डुats्गा र जीवित चित्रहरु को रूप मा पानी संग, हामी सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। अधिक जानकारी र खुल्ने घण्टा, वेबसाइट हेर्नुहोस्।
एक जीवित परिवार फार्म, Gkl into मा 1km। हामी बारे मा ४० डेयरी गाई र young० जवान जनावरहरु छन् कि शानदार ओक चराहरु खुला राख्छ। स्टकहोम को अद्भुत द्वीपसमूह मा टापुहरु। गर्मी को मौसममा हामी एक फार्म क्याफे, फार्म बेकरी र फार्म रेस्टुरेन्ट छ। हाम्रो टेरेस मा बस्नुहोस् र क्षेत्रहरु र ओक groves को दृश्य को आनन्द लिनुहोस्। हामी चाहन्छौं कि तपाइँ पारिवारिक वातावरण महसुस गर्नुहोस् र आशा छ कि यो हाम्रो घर को खाना र हाम्रो राम्रो कफी रोटी संग राम्रो स्वाद छ।
Haninge मा, तपाइँ विलासिता संग शहर को केन्द्र मा एक होटल मा वा महलहरु, होटलहरु र ग्रामीण इलाकामा र एक द्वीपसमूह वातावरण मा पाठ्यक्रम यार्ड मा विलासी रूपमा बस्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ जो सजीलै बाँच्न चाहानुहुन्छ द्वीपसमूह मा एक कुटीर भाडामा लिन सक्नुहुन्छ।
हावा र पानी
Vind o Vatten ले दलारोबाट सुरु हुने व्यक्ति, परिवार र समूहहरूको लागि नौकायन अनुभवहरू र नौकायन पाठ्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ। थप रूपमा, त्यहाँ नौकायन र मोटरबोट कोचहरू छन् जुन तपाईंको डुङ्गामा आउँछन् र तपाईंलाई नयाँ दिशाहरूमा तपाईंको डुङ्गाको जीवन विकास गर्न मद्दत गर्दछ। स्क्र्याचबाट सिक्नुहोस् वा नयाँ उचाइहरू लिनुहोस्! हामी मे देखि अक्टोबर सम्म खुला रहन्छौं र कहिलेकाहीँ हामीसँग जाडोमा पाल डुङ्गाहरू पनि चल्छन्
सुन्दर Hemviken मा तपाइँ नयाँ Smådalarö Krog पाउनुहुनेछ - Brasserie र Bränneri। यहाँ तपाइँ राम्रो, राम्रो पकाएको खाना खानुहुन्छ जहाँ मेनु समुद्र बाट एक स्पष्ट तत्व संग क्लासिक ब्रासेरी व्यंजन प्रदान गर्दछ। रेस्टुरेन्ट को आफ्नै ब्रान्डी, "Kaptenens Droppar" - एक स्वादिष्ट मसलादार schnapps साथै फार्म को इतिहास को लागी एक श्रद्धांजलि को प्रयास गर्न को लागी स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
एउटा जीवित पारिवारिक फार्म, १ किलोमिटर Gål into मा लगभग ४० डेयरी गाई र लगभग young० जवान जनावरहरु छन् कि शानदार ओक चराहरु खुला राख्छन्। स्टकहोम को अद्भुत द्वीपसमूह मा भेडा चरने टापुहरु। यार्ड मा त्यहाँ एक क्याफे र दुबै ठूलो र सानो दुबै को लागी वयस्क को लागी एक फरक सवारी स्कूल छ। हामी लामो पाठ छ जहाँ घोडा संग सम्पर्क महत्वपूर्ण छ। हामी सधैं बाहिर छौं र प्रकृति को उपयोग गर्न को लागी सवारी गर्न सिक्न। सेमेस्टर को समयमा हामी एक सवारी स्कूल जहाँ धेरै जसो मानिसहरु हरेक अन्य हप्ता सवारी, गर्मी मा र छुट्टिहरु मा हामी राम्ररी भाग लिए शिविर छ।
Björnö एक पुल जडान र घर को लागी एक कार सडक संग Dalarövägen नजिकै एउटा सानो टापु हो। Gålö, Dalarö र स्टकहोम को बारे मा 35 किमी को नजिक। तपाइँ तपाइँको आफ्नै घर मा ३५ वर्ग मीटर, २ बेड (सोफा ओछ्यान मा २), WC, नुहाउने, तातो र चिसो पानी, फ्रिज / फ्रीजर, स्टोभ / ओभन, फायरप्लेस, माइक्रोवेव, वाइफाइ, टिभी बस्नुहुन्छ। ताल दृश्य र समुद्री स्नान को लागी ५० मिटर। मूल्य: SEK ४०० प्रति व्यक्ति / रात (न्यूनतम २ रात)। ओछ्यान लिनन, तौलिया र अन्तिम सफाई सामेल छन्। अतिरिक्त शुल्क मा नाश्ता। जानकारी, फोटो र नक्शा को लागी हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। Åke र Birgitta Hansson दूरभाष: 3522. ई-मेल: abhansson@spray.se
एक जीवित परिवार फार्म, Gål on मा १km मा। वास्तविक sawmill मा, हाम्रो फार्म क्याफे र फार्म पसल हो, जहाँ हामी हाम्रा जनावरहरु, मासु र भेडा बाट मासु बेच्छौं। हामी हाम्रो आफ्नै दुध बाट बनेको चीज को साथै माछा, मह आदि हाम्रो छिमेकीहरु बाट बेच्छौं। सबै वर्ष राउन्ड तपाइँ साना खरगोशहरु बाट मध्यम आकार को बाछो र ठुलो गाई / घोडाहरु लाई हाम्रा सबै जनावरहरुमा / पालतू / cuddle स्वागत छ। बोर्ग परिवार तपाइँलाई स्वागत गर्दछ
ट्याक्सी डुö्गा Utö Värdshus
यदि तपाइँ नियमित डु boat्गा भ्रमण सूची बाहिर जान चाहानुहुन्छ, तपाइँ सजीलै हाम्रो साथ एक ट्याक्सी डु boat्गा चार्टर गर्न सक्नुहुन्छ! हाम्रो ट्याक्सी डुats्गाहरुको फ्लीट दुई जना साना र छिटो हिड्ने ट्याक्सी डुats्गाहरु सम्म people जना सम्म र एक थोरै ठूलो ट्याक्सी डु that्गा हो कि बोर्ड मा १२ यात्रुहरु लाई ढुवानी गर्दछ। बर्फ मुक्त सिजन मा डुats्गा यातायात मा छन्। हामी हाम्रो घर बन्दरगाह Utö बाट शुरू र वस्तुतः सम्पूर्ण स्टकहोम द्वीपसमूह संचालित, धेरै जसो यातायात दक्षिणी द्वीपसमूह मा ठाउँ लिन्छ। आरक्षण 6-12 08 504 Utö Värdshus 'नियमित खुल्ने घण्टा को समयमा बनाइन्छ।
सुन्दर Södertörn को बीच मा फोर्स Gård वाइकि Age युग बाट डेटि छ। हामी सवारी स्कूल, बाहिरी सवारी र हाम्रो आइसल्याण्डिक घोडाहरु मा निजी पाठ, र हाम्रो Lusitano घोडाहरु मा अनुभवी सवार लक्जरी पाठ को लागी सबै बर्ष राउन्ड खुला छ। हामी दर्जी सम्मेलन, किक-अफ र एक घोडा जडान संग इच्छाहरु अनुसार दुल्हन पार्टीहरु। खेत धेरै ऐतिहासिक भवनहरु छन्। र्‍यापिड्सको विपरित पुरानो मिलमा एउटा आरी पनि थियो र पुरानो क्रॉफ्टमा वरपरका मानिसहरु खेतमा काम गर्ने बस्थे। 08-500 107 89 मा कल गर्न वा हामीलाई bokningen.forsgard@telia.com मा ईमेल गर्न स्वागत छ
Smallsterhaninge चर्च मा एक सानो स्थानीय डेयरी, मात्र स्टॉकहोम को दक्षिण। हामी विभिन्न प्रकार को artisanal चीज उत्पादन, राम्रो क्रीम चीज बाट अर्ध-हार्ड putty चीज सम्म। पनीर को नाम Haninge मा स्थानहरु बाट लिइएको हो - Tyresta, Vendelsö, Åva र अन्य। हामीले बनाएको दूध G onl on मा Stegsholm को खेत मा गाई बाट आउँछ। हामी एक फार्म पसल छ कि सबै वर्ष राउन्ड खुला छ। वर्तमान समय को लागी वेबसाइट हेर्नुहोस्।
क्याफे Tyresta द्वारा
Tyresta राष्ट्रिय निकुञ्ज मा स्थित छ। हाम्रो घर बेकरी मा, हामी सकेसम्म जैविक सामाग्री संग पकाउँछौं। हाम्रो चिया र कफी पनि जैविक / निष्पक्ष व्यापार हो। हामी पक्का गर्छौं कि सबैजना खान र हामी संग कफी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले हामी तपाइँ को लागी शाकाहारी, शाकाहारी, ल्याक्टोज वा ग्लुटन असहिष्णु को लागी केहि प्रस्ताव गर्न सक्छौं। हामीलाई स्वागत छ स्टाफ संग लीना इच्छा। हामी सबै बर्ष राउन्ड खुला छौं र कुना को वरिपरि प्रकृति छ!
Ornö समुद्री यातायात
Dalarö देखि Ornö सम्म कार फेरी दक्षिणी द्वीपसमूह को सबैभन्दा ठूलो टापु को साथ मुख्य भूमि लाई जोड्दछ। समय तालिका र वेबसाइट मा बुकिंग।
Haninge को दक्षिणी द्वीपसमूह मा, पश्चिम मा Hårsfjärden र बाहिर समुद्र को सामना गरीरहेको ठूलो खाडी Mysingen संग, Muskö छ। यहाँ, स्वीडिश नौसेना १ main औं शताब्दी देखि १ 1500 until सम्म यसको मुख्य आधार थियो। एक विशाल नौसेना बेस जो स्टकहोम मा ओल्ड टाउन को रूप मा ठूलो क्षेत्र कब्जा चट्टान मा विस्फोट भएको छ। १ 1967 s० को दशक मा, एक सुरंग Muskö र मुख्य भूमि को बीच बनाइएको थियो। कार सुरंग लगभग 1960 किलोमिटर लामो छ र खाडी तल3मीटर को रूप मा गहिरो चल्छ। Muskö मा १ large औं शताब्दी, Arbottna र Ludvigsberg बाट दुई ठूला हवेलीहरु छन्।
Ekudden शिविर, पाठ्यक्रम, सम्मेलन वा निजी उत्सवहरु को आयोजन को लागी तपाइँको लागी ठाउँ हो। हाम्रो ठूलो, प्यारा भान्छा मा तपाइँको खाना पकाउनुहोस्, हाम्रो छिमेकी फार्म बाट खानपान को आदेश वा तपाइँ बरु तपाइँको आफ्नै शेफ आएर साइट मा तपाइँको खाना पकाउन चाहानुहुन्छ? हाम्रो साथ, यो बुक गर्न को लागी सजीलो छ र तपाइँको शर्तहरुमा भेलाहरु लाई बाहिर निकाल्छ। बारबेक्यू क्षेत्रहरु, सौना, बलौटे समुद्र तट, जेटी र फुटबल पिच संग, यो बाँच्न र फस्टाउन सजिलो छ। सायद यही कारण हो कि हाम्रा पाहुनाहरु बर्ष बर्ष पछि फर्कन्छन्! हामी सफाई साथै पानाहरु र तौलिया तपाइँको बुकिंग को लागी विकल्पहरु प्रदान गर्दछौं। हाम्रो लोकप्रिय तातो टब बुक गर्न को लागी अवसर लिनुहोस्! हामी मद्दत गर्छौं
Almåsa, Brandbergen जैव Cosmopolite, Dalarö, Fjärdlång प्रकृति आरक्षित, Gölö प्रकृति आरक्षित, Haninge सी, Huvudskärsarkipelagen, Häringe महल, Jordbro, Kymendö, Muskö, Nåttarö, Ornö, Rånö, Sandeda राष्ट्रीय उद्यान, Sandedale राष्ट्रीय उद्यान, Sandedale राष्ट्रीय उद्यान, Sandedale राष्ट्रीय उद्यान पार्क, ölö, strsta महल, Öster- र Västerhaninge